Maalinta: Abriil 17, 2020
Agaasinka Guud ee EGO wuxuu kordhiyay tirada shaqaalaha gaadiidka si loo kordhiyo tayada adeegyada basaska iyada oo aragtida ah in ay noqoto hay'ad keenta dadka deggan Ankara nolosheeda nabad iyo xasillooni. Ku guuleystey imtixaan qoraal ah oo la taaban karo [More ...]
ANKARAY iyo MET ma xiran yihiin Sabtida iyo Axadaha?
Iyada oo la raacayo baaxadda tallaabooyinka laga qaadayo cudurka 'coronavirus' (Covid-19), bandoowga ayaa la dhaqan gelin doonaa 18-19 Abriil 2020 (dhammaadka wiigga). [More ...]
Maalintii 2 Milyan Masks ayaa laga soo saaray Malatya
Duqa Magaalada Dawladda Hoose ee Magaaladda Selahattin Gürkan, si loo daboolo baahida maskiinka iyo guud ahaan loo baahan yahay ee aagga warshadaha Malatya Koowaad iyo Labaad, iyadoo uu ku faafayo cudurka faafa ee dalkeenna. [More ...]
Gaarsiinta Halis ah ee HAVELSAN ee loogu talagalay Reis Class Submarine
Qaybta labaad ee Submarine Taliska iyo Nidaamka Xakamaynta ee ay soo saartey HAVELSAN iyada oo ku xaddidan Mashruuca Nooca Submarine-ka Cusub (YTDP) waxaa loo diray Taliska Shipyard Gölcük. Hawlaha wax soo saarka waxay ku sii socdaan baaxadda Mashruuca Submarine-ka Nooca cusub ee HAVELSAN [More ...]
TMMOB iyo Chambers waxay gudbinayaan dacwad ka dhan ah qandaraaska lagu hayo mashruuca Kanal Istanbul
Warbixinta kama dambaysta ah ee 'Istanbul İstanbul EIA', waxaa dacwad ka gudbisay TMMOB iyo Golaha laxiriira, iyadoo la tixgalinayo saameynta xun ee Mashruuca Kanal ku leeyahay aagagga la ilaaliyo iyo hiddaha dhaqanka ama halista uu kaga imaan karo goobahan. [More ...]
Sida ku xusan bayaanka ay soo saareen Maamulka Ankara, Golaha guud ee nadaafadda guud, ee lagu soo doortay hoggaanka Vasip Şahin, waxay qaateen go'aanno dheeri ah iyagoo ka wada hadlay tilmaamaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo arrimo kale oo ku saabsan ajandaha. Nooca cusub ee gobolka oo dhan [More ...]
Basaska xiriirka la leh Koonseli Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Kobaneli waxay sameyn doonaan duullimaadyo bilaash ah kuwa ku qasbay inay shaqeeyaan. Kuwa laga reebay xayiraadda oo ay tahay inay ka shaqeeyaan tallaabooyinka bandoowga si loo dhaqan-galiyo dhammaadka usbuuca [More ...]
2 Milyan TL Taageero ayaa laga helayaa Basaska Dadweynaha ee Kayseri
2 Milyan TL Taageero laga helo Kayseri Metropolitan ilaa Basaska Dadweynaha; Duqa Magaalada Kayseri ee Dowlada Hoose Iyada oo la raacayo tilmaamaha Memduh Büyükkılıç, qiyaastii 2 milyan oo taageero lira ah ayaa la siin doonaa milkiilayaasha basaska gaarka loo leeyahay iyo wadayaasha. [More ...]
Inta lagu jiro bandowga, oo la dhaqan gelin doono usbuuca dhammaadka, saacadaha shaqada ee gaadiidka dadweynaha ayaa dib loo habeeyay. Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay dejisay duullimaadyo aroortii iyo galabtii ah kuwa ay tahay inay shaqeeyaan usbuuca dhammaadka. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadday hindisooyinkeeda qaab dhismeedka, kuwaas oo in muddo ah socdey oo ay ku jiraan jidadka iyo jidadka aan lahayn wax dhibaato kaabayaal ah. Xaaladda guud, Khaliijka waxaa soo saaray Wasaaradda Sayniska [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay u isticmaashay labo mashiin oo cusub si loo kordhiyo awooda wax soo saarka maaskaro ee ay kujirto xaddiga la dagaalanka faafitaanka coronavirus. Madaxweyne Tunç Soyer, oo baaray mashiinnada soo saari doona maalin kasta 60 kun oo maaskaro ah, ayaa yidhi, “Labadan [More ...]
Agaasinka Guud ee IETT, oo xiriir la leh Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, ayaa sameeyay qorsheyaal lagu mamnuucaayo bandoowga 18 Abriil, Sabtida-Abriil 19, Axadda iyada oo la eegayo cabirrada fayraska corona. IETT; subax [More ...]
IETT waxay xustay in shilka ka dhacay Avcılar, halkaas oo laba metrobus ah ay ku dhaceen, ay ka dhalatay mid ka mid ah darawalada is-dhaafsaday. Bayaanka ay soo saartay IETT; “16.55 fiidkii, oo ka imaneysa jihooyinka iska soo horjeeda ee u dhexeeya IMM Bulshooyinka IMM ee khadka tareenka iyo xarumaha Küçükçekmece [More ...]
Marka la eego baaxadda tallaabooyinka la qaaday cudurka 'coronavirus' awgeed, isticmaalka gaadiidku hoos ayuu u dhacay. Waxaa jiray halis weyn oo ah guuldarrooyinka gawaarida ee weli baarkinka ah oo aan muddo dheer loo adeegsan. Wadaha Guud ee Adeegyada Farsamooyinka Suuqgeynta Turkiga Özgecan Çakıcı, [More ...]
Turkey ayaa Kovid-19 hartay ka dib markii square madhan ka bannaan la eegay
University Istanbul Technical (ITU) Satellite Isgaarsiinta iyo Remote Ogaanshuhu Center (I CSCRS), nooc cusub oo corona (Kovid-19) ka hor ka dillaacay iyo ka dib images qaaday dayax-gacmeedka, tallaabooyinka la socday, isugu square ee Turkey, Waddooyinkiisa xeebaha [More ...]
İpekülük Caddesi waxay sannado kadib ku eegi doontaa Bursa muuqaal casri ah
Dowladda hoose ee Bursa waxay dayactireysaa bilowgii ilaa İpekcılık Caddesi, oo barnaamijka ku jirtay 11 sano. Iyada oo ay isku mar wada shaqeeyaan dhammaan xarumaha kaabayaasha, jidku wuxuu heli doonaa muuqaal casri sannado kadib. [More ...]
Ayaa Laga Mamnuucay Bandowga?
Laga bilaabo xilliga coronavirus uu dillaacay, talooyinka Wasaaradda Caafimaadka iyo Guddiga Sayniska, iyadoo la raacayo tilmaamaha Madaxweynahayaga; Maareynta halista faafa / faafinta marka loo eego caafimaadka bulshada iyo kala dambeynta bulshada, hubinta go'doomin bulsho, fogaanta bulshada [More ...]
'10 Xeerarka Dahabka ah ee Midnimada ee Fidista 'Golaha Magaalada Ankara
Golaha Magaalada Ankara (AKK) wuxuu ugu yeerayaa maal-gashadayaasha inay ka hortagaan cudurka faafa '' Xeerarka Dahabka ah ee Wada-jirka ah ee dillaacay '. Mashruuc lagu fududeynayo nolosha magaalada caasimada inta lagu guda jiro faafida iyo kordhinta dhaqanka midnimada maxalliga ah [More ...]
Golaha Khadka Tooska ah ee Isbitaalka Kocaeli ee Magaalada Kocaeli wuxuu noqon doonaa mid caadi ah
Midowga Dawladaha Hoose ee Marmara iyo Duqa Magaalada Kocaeli ee Magaalada Assoc. [More ...]
Miyay Metro iyo Ferry shaqeeyaan Sabtida iyo Axadda ee Istanbul?
Toddobaadkan, marka bandoowga la dhaqan-gelin doono, waxay hay'adda IMM sii wadi doontaa inay ugu adeegto magaalada Istanbul iyada oo leh 17 kun oo shaqaale ah. Adeegyada baska, metro iyo doonta ayaa la qaban doonaa subaxa iyo fiidka. Halk Ekmek iyo Hamidiye [More ...]
Xilliga Maskematic ee Saldhigyada Mitir ee Izmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay bilaabeen inay masjidka saaraan saldhigyada metrooga si ay ugu fududaato marin u helka muwaadiniinta xorta ah maaskaro caafimaad. Cinwaanka ugu horreeya ee arjigan wuxuu ahaa Konak Metro Station. Madaxweyne Tunç Soyer, oo adeegsanaya maaskaro, ayaa yidhi, “Muhiimadeena waxaa leh dadka reer Izmir. [More ...]
Maanta taariikhda: 17 April 1925 Ankara-Yahshihan Line
Maanta oo Taarikhdu Tahay 17 Abriil 1869 Waxaa heshiis la galay Baron Maurice de Hirsch, oo asal ahaan ka soo jeeday Hangari, nin u dhashay dalka Hungary, una dhisaya jidka Rumeli Railways. Marka dhismaha la dhammeeyo, baanka caanka ah Rothdchild wuxuu ku shaqeyn doonaa khadka. [More ...]